कसले छाड्यो यी महिलालाई तीनकुनेमा ? - Kohalpur Trends
कसले छाड्यो यी महिलालाई तीनकुनेमा ?
१ पुस, काठमाडौं । काठमाडौंस्थित तीनकुनेको व्यस्त सडक । सडकको छेउमा फुटपाथ । पुटपाथमा पनि मानिसको ओहोर–दोहोर बाक्लो छ । सडकको पश्चिमपट्टिको फुटपाथ छेउमै भिरालो जमिन छ । जहाँ एक अधवैशे महिला सुतिरहेकी छिन् ।
मोटोमाथि ब्ल्याङ्केट, ब्ल्याङ्केटमाथि उनी सुतेकी छिन् । उनको टाउकोमा सिरानी अडिएको छ । र, ब्ल्याङ्केट नै ओढेकी छिन् ।
ती महिलालाई सरिता खड्काले बाटो हिँड्दै गर्दा तीन दिनअघि देखिकी थिइन् । त्यतिबेला पनि ती महिलाको आसन उस्तै थियो । सरिताले भनिन्, ‘अफिसबाट फर्कंदै गर्दा साँझको आठ बजेतिर पुल छेउमा कपडाको थुप्रो र मान्छेजस्तै देखें । नजिकै पुगेर हेर्दा भर्खरै कसैले छोडेर गएको जस्तो देखिन्थ्यो ।’
महिलाको अनुहार गोरो छ । तर, दुब्लाएर कक्रक्क परेको । शरीरमा न्यानो कपडा लगाइएको थियो । ती महिला भने न हलचल गर्न सक्थिन्, न त केही बोल्न नै । सरिताले सोचिन्– कोही आफन्त आएर लैजालान् की ! अनि उनी बाटो लागिन् ।
तर, अर्को विहान पुग्दा पनि ती महिलाको अवस्था उस्तै थियो । सरिताले भनिन्, ‘मन थाम्न नसकेर डाइपर परिवर्तन गरिदिएँ अनि केही खाना र जुस खुवाइदिएँ ।’ ती महिलाले भने आफैं खानसमेत सक्दैनथिन् । किनकी उनलाई प्यारालाइसिसले गाँजेको छ ।
मंगलबार विहान पनि उनी नौ बजेसम्म उनै महिलाको छेउमा गएर बसिन् । खाना खुवाइन् । अहँ ! महिलालाई लिनको लागि कोही आफन्त आएनन् । सरिताले भनिन्, ‘बोलाउँदा पनि केही बोल्न सक्नुभएन । रोइमात्र रहनुभयो ।’ सरितालाई आपत आइलाग्यो– अब कहाँ लैजाने, कसलाई भन्ने ? यही आपतले सरिताले मानवसेवा आश्रमबारे जानकारी पाइन् ।
मानव सेवा आश्रमका संयोजक सुमन वर्तालाले भने, ‘उहाँलाई अपरान्ह उद्धार गरेका छौँ ।’
बेवारिसे ती महिलाको प्रकृति हेर्दा कसैले अस्पताल वा घरबाटै लिएर छोडेको जस्तो देखिने सुमन बताउँछन् । उनले थपे, ‘महिलाको उमेर ४० देखि ४५ वर्षको जस्तो देखिन्छ । आफन्तले नै लिएर छोडेको हो की भन्ने अनुमान पनि छ ।’ तर, उनीहरुले पनि अहिलेसम्म आफन्त पत्ता लगाउन सकेका छैनन् ।
तीनकुनेमा देखिएको यो दृष्यले मानिसहरु हिंस्रक बन्दै गइरहेको देखाउँछ । मंसिर–पुसको चिसो जाडोमा आफ्नै अभिभावकलाई घरबाट निकालेर सडकमा लावारिस छोड्न कस्तो मानसिकताले काम गर्छ ? यो घटनाले मानवीयतामाथि निकै ठूलो प्रश्न चिन्ह पनि खडा गरेको छ ।
केही समयअघि आफ्नै परिवारबाट हेला भएपछि घर छोडेर खुलामञ्चमा निःशुल्क खाना कुरेर बसिरहेका एक वृद्धको समाचार अनलाइनखबरबाटै प्रकाशित भएको थियो । भर्खर जन्मिएको शिशुलाई फुटपाथ र झाडीमा फ्याँकिएको समाचार पनि पटक–पटक प्रकाशित गर्नुपरेको छ ।
दुई वर्षअघि वर्षअघि मानव सेवा आश्रमकै छेउमा क्यान्सर लागेको एक वृद्धलाई लिएर आफन्तले छोडेका थिए । उनको मुख सुन्निएको थियो र सिकिस्त विरामी थिए । यस्तो देखेपछि आश्रमले नै वृद्धाको स्याहार गर्न थाल्यो । सुमन भन्छन्, ‘कहिलेकाहीँ यस्ता केसहरु भेटिरहेका हुन्छन् ।
परिवार भएपछि आश्रमले लिँदैन भन्ने थाहा पाएर मानिसहरुले यस्तो गतिविधि गर्ने सुमनको भनाइ छ । तर, ती वृद्धा लामोसमय बाँच्न सकेनन् । परिवारले नै बोझको रुपमा लिएर आफन्तलाई जिउँदै सडकमा छोड्दिने जस्तो क्रूर निर्णय लिने गरेका सुमनको बुझाइ छ ।
Previous Previous post: संवैधानिक परिषदको संरचनामै त्रुटि छ, तर अध्यादेश समाधान होइन : मसाल
Next Next post: गोरखामा बस दुर्घटना हुँदा २२ घाइते, ५ जनाको अवस्था गम्भिर